जिम्प के हो | रचनात्मक अनलाइन
जिम्प के हो
एनकर्नी आर्कोया | 02/10/2021 14:04 | गिम्प GenericName
छवि सम्पादन कार्यक्रमहरु को बीच, त्यहाँ कुनै संदेह छैन कि सबैभन्दा राम्रो ज्ञात फोटोशप हो। जे होस्, त्यहाँ अर्को छ कि प्रतिद्वन्द्वीहरु र धेरै धेरै ब्रान्ड मा रुचाउँछन्। यसको अतिरिक्त, यो नि: शुल्क छ र व्यावहारिक रूपमा सबै भन्दा धेरै प्रयोग गरीन्छ। तपाइँलाई थाहा छ को हो? यो जिम्प को बारे मा छ। तर जिम्प के हो?
यदि तपाइँ यो छवि सम्पादन कार्यक्रम को बारे मा सुन्नुभएको छ तर यकीन छैन कि यो के हो, यदि यो राम्रो वा फोटोशप को रूप मा उस्तै हुन सक्छ र तपाइँ यसको साथ के गर्न सक्नुहुन्छ, तब हामी तपाइँलाई जिम्प को बारे मा जान्न आवश्यक सबै कुरा को बारे मा कुरा गर्नेछौं।
1 जिम्प के हो
1.1 जिम्प को मूल
2 Gimp को उपयोग को लाभ र हानि
3 यो के हो?
4 कार्यक्रम व्युत्पन्न
पहिलो कुरा तपाइँ Gimp को बारे मा जान्नु पर्छ यसको संक्षिप्त नाम को अर्थ हो। विशेष गरी, यो एक GNU छवि हेरफेर कार्यक्रम हो, वा उही के हो, एक छवि सम्पादन कार्यक्रम हो। तपाइँ दुबै बिटमैप र चित्र, फोटो, चित्र, आदि संग काम गर्न सक्नुहुन्छ।
जस्तै हामीले पहिले उल्लेख गरिसकेका छौं, कार्यक्रम नि: शुल्क र नि: शुल्क छ, दुबै विन्डोज र GNU / लिनक्स र म्याक ओएस एक्स मा स्थापित गर्न को लागी सक्षम।
फोटोशप संग यसको सम्बन्ध को सन्दर्भ मा, उनीहरु दुई फरक प्रोग्रामहरु छन्, यद्यपि यो एक विकल्प हो कि पनी छवि सम्पादन मा सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरीएको कार्यक्रम लाई पार गर्दछ। अब, यसको विकास Photoshop मा आधारित थिएन, र यसको इन्टरफेस उस्तै छैन।
ती जो कोसिस गरीएको छ भन्छन् कि यो अधिक जटिल र गाह्रो संग काम गर्न को लागी हो, खास गरी यदि तपाइँ Photoshop को लागी प्रयोग गरीरहनुभएको छ। तर एक पटक तपाइँ जान्नुहुन्छ कि यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, राम्रो परिणामहरु संग यो हासिल गर्न सकिन्छ।
जिम्प को मूल
जिम्प १ 1995 ५ मा स्पेन्सर किमबल र पिटर म्याटिस को माध्यम बाट जन्मिएको थियो। उनीहरुको लागी यो एक सेमेस्टर व्यायाम थियो कि उनीहरु UC बर्कले विद्यार्थी कम्प्यूटर क्लब मा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। जे होस्, यो यति नवीन थियो कि यसले धेरैको ध्यान खिचेको थियो।
एक जिज्ञासा हो कि धेरैलाई थाहा छैन कि जिम्प को मूल नाम मा नाम छैन जसको द्वारा यो अब ज्ञात छ। अन्य शब्दहरुमा, जब यो जन्मिएको थियो यो एक "सामान्य छवि हेरफेर कार्यक्रम" थियो। जे होस्, १ 1997 मा यो "GNU छवि हेरफेर कार्यक्रम" मा परिवर्तन भयो।
अर्को जिज्ञासा यो हो कि कार्यक्रम को लोगो, जो ब्वाँसो वा कुकुर जस्तै देखिन्छ, एक नाम छ। यो Wilber, आधिकारिक जिम्प शुभंकर हो कि 1997 मा Tuomas Kuosmanen (tigert) द्वारा बनाईएको थियो। वास्तव मा, तपाइँ विल्बर निर्माण किट साइट मा अधिक छविहरु देख्न सक्नुहुन्छ, जो जिम्प स्रोत कोड मा छ। र हो, त्यो शुभंकर कार्यक्रम को उपयोग गरी डिजाइन गरीएको थियो, यो कम हुने वाला थिएन।
Gimp को उपयोग को लाभ र हानि
छवि सम्पादन उपकरण ती मध्ये एक हो कि अन्य कार्यक्रमहरु प्रतिद्वन्द्वीहरु हो। तसर्थ, त्यहाँ कुनै संदेह छैन कि यो धेरै फाइदाहरु छन् कि यो को लागी बाहिर खडा छ। तर, यसको पनि बेफाइदा छन्।
यो नि: शुल्क छ।
तपाइँ तपाइँको कम्प्यूटर मा यो स्थापित गर्न को लागी आवश्यक छैन, तर तपाइँ एक स्थानीय फोल्डर, एक बाह्य डिस्क वा इन्टरनेट क्लाउड बाट कार्यक्रम हुन सक्छ।
उच्च गुणस्तर सुविधाहरु तह र पथ को लागी उपलब्ध छन्।
केवल केहि चरणहरु मा फोटो पृष्ठभूमि हटाउनुहोस्।
यो Photoshop भन्दा धेरै छिटो छ।
ती सबै राम्रा चीजहरु को बावजूद, यो पनी केहि हानि छ जो छन्:
8 भन्दा बढी बिट, ग्रेस्केल वा अनुक्रमित छविहरु को RBG संग काम गर्न सक्षम छैन। यद्यपि रेफरल को माध्यम बाट समस्या आंशिक हल गर्न सकिन्छ।
यो Photoshop को तुलना मा अधिक सीमाहरु छ, र त्यो जब तपाइँ चित्रहरु संग धेरै पटक काम गर्दछ यो देखाउँछ। साथै, यदि तपाइँ छविहरु सम्पादन गर्न को लागी त्यहाँ धेरै तहहरु छन्, तपाइँ धेरै समस्याहरु मा चलाउन सक्नुहुन्छ।
यो प्रयोग गर्न को लागी अधिक जटिल छ, विशेष गरी शुरुआत मा। यद्यपि तपाइँ YouTube मा पाइने ट्यूटोरियल को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
अब जब तपाइँ Gimp को बारे मा एक सानो अधिक जान्नुहुन्छ, तपाइँ प्रायः सम्भवतः यो के को लागी एक विचार हुनेछ।
सामान्य मा, जिम्प छविहरु संग काम गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ र यो एक स्वतन्त्र र खुला उपकरण हो कि धेरै टेक्नोलोजीहरुमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, धेरैले यसलाई स्थापना गर्न छनौट गर्दछन्।
यदि हामी कार्यक्रम मा एक सानो गहिरो जान्छौं, तपाइँ देख्नुहुनेछ कि यो पढ्दछ र विभिन्न छवि ढाँचाहरु जस्तै jpg, gif, png, tiff ... र यो फोटोशप पढ्छ लेख्दछ। अब यसको आफ्नै भण्डारण ढाँचा Xcf हो। तपाइँ पनि पीडीएफ र Svg फाइलहरु (भेक्टर छविहरु) आयात गर्न सक्नुहुन्छ।
यो धेरै उपकरणहरु छन् कि तपाइँ Photoshop मा पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै तहहरु, च्यानलहरु, ब्रश को विभिन्न प्रकार, आदि। यो गर्न को लागी तपाइँ चयन उपकरण, स्मार्ट कैंची, रंग को उपकरण, तराजू, झुकाव, विकृत वा क्लोन परिमार्जन गर्न को लागी जोड्नु पर्छ ... यो अन्य उपकरण र / वा फिल्टर रंग र साथमा छवि र प्रभाव र छवि संग एक मेनू हेरफेर गर्न को लागी छ। उपचार।
अन्य शब्दहरुमा, तपाइँ एक उपकरण छ जसको साथ तपाइँ स्क्र्याच बाट सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ वा कुनै पनी छवि तपाइँलाई पनी परिमार्जन गर्न को लागी तपाइँ अर्को छवि सम्पादन कार्यक्रम संग गर्न सक्नुहुन्छ।
जब बचत, पूर्वनिर्धारित द्वारा यो यसको आफ्नै ढाँचामा त्यसो गर्नेछ, तर छवि निर्यात तपाइँ तपाइँलाई आवश्यक ढाँचा छनौट गर्न दिनेछ।
Gimp को अतिरिक्त, कार्यक्रम धेरै वा कम ज्ञात छन् कि धेरै व्युत्पन्न प्राप्त गर्न को लागी व्यवस्थित गरीएको छ। विशेष गरी, तपाइँसँग छ
GimpShop। यो एक इन्टरफेस हो कि तपाइँ क्लोन गर्न र जिम्प फोटोशप जस्तै अधिक बनाउन को लागी अनुमति दिन्छ। यस तरीकाले, जो यो कार्यक्रम को लागी प्रयोग गरीन्छ उनीहरु लाई अधिक सहज लाग्छ, विशेष गरी उनीहरु एक दैनिक आधार मा प्रयोग गर्ने सबै कुरा पाउन।
जिम्फोटो। अर्को परिमार्जन कि यो फोटोशप को समान हुन को लागी अनुमति दिन्छ। यो एक अधिक वर्तमान संस्करण, २.४ छ।
समुद्री किनार। यो व्युत्पत्ति म्याक को लागी हो र यसमा तपाइँ जिम्प को आधारभूत तत्वहरु, तर उन्नत छैन पाउनुहुनेछ।
सिनेपेन्ट। यो पहिले फिल्म जिम्प को रूप मा परिचित थियो र रंग च्यानल प्रति गहिराई को १bबिट कार्यक्रम मा थप्न को लागी अनुमति दिन्छ। यो एक फ्रेम प्रबन्धक र अन्य राम्रो छायांकन कला संग सम्बन्धित छन्।
अब जब तपाइँ Gimp को बारे मा अधिक जान्नुहुन्छ, यो समय को बारे मा सोच्न को लागी कि यो छवि सम्पादन कार्यक्रम हो कि तपाइँ खोजिरहनु भएको थियो। यसको धेरै फाइदाहरु तपाइँलाई यस्तो रूपमा सशक्त बनाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाइँ पनि हानि लाई विचार गर्नु पर्छ। तिम्रो के बिचार छ? के तपाइँ जिम्प छनौट गर्नुहुन्छ वा तपाइँ छविहरु सम्पादन गर्न को लागी अर्को कार्यक्रम रुचाउनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » गिम्प GenericName » जिम्प के हो
कसरी वर्ड मा व्यापार कार्ड बनाउन